ကိုထွဋ်: ကျနော့်ရဲ့ ပြတင်းပေါက်လေး
ဟုတ်တယ် ကျနော့်နေတဲ့ အခန်းမှာ ပြတင်းပေါက်လေးတစ်ခုရှိတယ်.
ကျနော်နေတဲ့ အခန်းဆိုတော့ လောလောဆယ် ကျနော်ပိုင်တာပေါ့နော်..
ပြန်ရောက်လာတိုင်းကျနော် အရင်ဆုံးလုပ်မိတာကတော့ ဖယောင်းတိုင်ကိုထုတ် မီးခြစ်ခြစ်ရတာပါပဲ။
အလုပ်က ပြန်လာတိုင်း မီးကပျက်နေတယ်လေ။
နောက်တော့ ဘတ်ထရီကုန်နေတဲ့ အိုင်ပတ် ၂ ကို စားပွဲပေါ်တင်.. အိုင်ဖုန်း ၄အက်စ် ကိုလဲ စားပွဲပေါ်မှာတင်ပီး ပြတင်းပေါက်လေးကို ဖွင့်လိုက်တယ်.. ပီးတော့ ရေချိုးခန်းကိုသွား လက်ဆေး ခြေဆေးပီး ပြတင်းပေါက်နားမှာ ခုံတစ်လုံး ယူထိုင်ပီး ငေးကြည့်နေလိုက်တယ်။
ထိုအချိန်မှာပဲ အတွေးထဲကို ဝင်လာတာ တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းတာတွေ၊ရန်ဖြစ်ရတာတွေ ပျော်ရွှင်ကြည်နှုးရတာတွေပေါ့။ အဲဒါတွေကိုထွက်သွားဖို့ သက်ပြင်းလေးကို အနားမှာ ဘယ်သူမှမရှိပေမဲ့ ခိုးချရင်း ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ ပြတင်းပေါက်ကို ကျော်ပီး လောကကြီးကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။
ပြတင်းပေါက်ကနေလှမ်းကြည့်ရင် တွေ့ရတာက အိမ်လေးတွေပဲ။ တချို့အိမ်တွေက မီးပျက်နေပေမဲ့လဲ အင်ဗာတာလေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လေးတွေတော့ လင်းနေတယ်။ တချို့ကျတော့ လဲ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေနဲ့ပေါ့။ အဲလိုနဲ့လိုက်ကြည့်ရင်း အနားမှာ၇ှိတဲ့ ဘီယာဆိုင်ကို ကြည့်မိတော့။
သူတို့လောက ကတော့ ဆူညံနေလေရဲ့။ နီနီ ဝါဝါ ပြာပြာ မီးရောင်စုံတွေရဲ့အောက်မှာ လှနေတဲ့ မိန်းမလေးတွေရယ် အဆီပျံနေတဲ့မျက်နှာတွေရယ်ကိုတွေ့ရမယ်လို့ စိတ်ကူးပုံဖော်နေမိတယ်။
အဲဒီ အချိန်မှာ သူနားထဲကြားလိုက်ရတာက ရယ်သံလေးတွေ ...ဒီရယ်သံတွေကို သူ မှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိနေခဲ့တယ်။ ရင်းလဲ ရင်းနှီးတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ သူသတိရမိတာက ဖန်ခွက်တစ်လုံးနဲ့အဖော်ပြုနေတဲ့ သူ့ပုံရိပ်တွေ နံရံကို ကျောမီရင်း အိုင်ဖုန်းနဲ့ ဂိမ်းဆော့နေတဲ့ သူ့ပုံရိပ်တွေ ကို ပြန်မြင်ယောင်လာတယ်။
ဒီနေ့လည်းကျနော် အလုပ်က ပြန်လာတယ်. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ဘီယာဆိုင် အသစ်အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပေါ့။ပျော်လို့ ရီလို့ မောလို့ပေါ့
အိမ်ပြန်ရောက်တယ်.. ဖယောင်းတိုင်ထွန်းတယ်.. အိုင်ပတ်တွေ အိုင်ဖုန်းတွေကို စားပွဲပေါ်တင်တယ်။ ပြတင်းပေါက်ဖွင့်တယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ တစ်ခုခုကို ဆာလောင်နေတဲ့ အသံကို ပြန်ကြားရတယ်။
လမင်းကိုရှာကြည့်တော့ မတွေ့ လမိုက်ရက်ထင်ပါရဲ့..
မီးပြာပြာ နီနီ တွေကို လှမ်းကြည့်မိတယ်.
ဘီယာခွက် ကိုင်ထားပီး မခို့တခို့ရပ်နေတဲ့ ကောင်မလေး ပိုစတာကို လှမ်းကြည့်မိတယ်။
တိုးညှင်းလွန်းနေပေမဲ့ ကျနော် ဘာပြောလဲ ဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်။
ဘယ်သူမှလဲ အနားမှာ မရှိဘူး ဘယ်သူပြောမှန်းလဲ မသိဘူး။
ဘယ်နေရာက ပြောမှန်းလဲ မသိဘူး
ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ပြောလိုက်တယ် ကျနော်ကြားလိုက်တယ်။
ပြတင်းပေါက်ကို ပိတ်တယ်. အိုင်ဖုန်းကို ယူတယ်။
အပြင်သွားဖို့ပြင်တယ် တံခါးကို လော့ချတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ခုနက စကားကို ထပ်ကြားလိုက်တယ်။
"မင်း ဘီယာသွားသောက် သင့်ပီတဲ့". နှုတ်ခမ်းကို သပ် ..လေးကိုင်းသဏ္ဍန် ကွေးညွှတ်ပီး
တချိန်တည်းမှာပဲ ကြားလိုက်ရတာက" ဟေး" ဆိုတဲ့ အသံကြီးပဲ
အော် မီးလည်း ပြန်လာပီကိုး...
ကျနော်လည်း လေလေးချွန်ပီး အိမ်နားမှာ ရှိတဲ့ ဘီယာဆိုင်ကို ထွက်လာလိုက်ပါတော့တယ်။
ပီ အက်စ်။ ။ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ပို့စ်ကို မှီညမ်း၍ ပေါက်ကရလုပ်ထားသည်။
Posted by ကိုထွဋ် at Wednesday, May 23, 2012
တစ်အိုင်ထဲ အိုင်နေတဲ့ အိုင် အိုင် အိုင်တွေက လွဲလို့ကျန်တာ လွတ်စေ။ အိုင်တွေ အကုန် ဆင်ဆာဖြတ်။ အေးရောလား။
စီအိုင်အေရဲ့ပိုစ့်ကိုတောင် ကော်ပီရဲတယ် ကြည့်စမ်း ကြည့်စမ်းးး ဒင်းတော့.. :P :P :P
မျှစ်လူဇိုးပဲ...မြန်ထှာ ကော်ပီကူးတာ မနက်ကမှ အဲဒီအော်ရီဂျင်ပို့စ်ကိုသွားမန့်လာတာ..။
ဖျားဖျား သူမို့ပုံဒူ ကူးရဲဒယ် အံရော အံရောအေး)))
စီအိုင်အေ ပစ်ပစ် said...
ဒိုင်းညှောင့် ဒိုင်းညှောင့် ဒိုင်းညှောင့်
ဒါကြောင့်စဉ်းစားနေတာ ဒီခေါင်းစဉ်မျိုးမြင်ဖူးပါတယ် လို့...အိုင်ပက်လည်းပြောသေး ဖယောင်းတိုင်လည်းထွန်းသေးဆိုတော့ ဘယ့်နှာပါလိမ့်လို့လည်း စဉ်းစားမိသေးသဗျား...
အင်း လောလောဆယ်ကလည်း ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြကြတာက ခေတ်စားနေသကိုး...ဦးဟန်ကြည်တို့တော့ ထွန်းရဲပေါင်...တော်ကြာ မလေးမခန့်လုပ်တယ်ဆိုပြီး ဆွဲနေမှ...ရိုးရာနည်းအတိုင်း ရေနံဆီမီးခွက်လေးများ ထွန်းပြရရင်ကောင်းမလားလို့...
ဆာဟန်.. အိုင်ပတ်က ရှိကြောင်းကြွားတာ..
အင်ဗာတာ မဝယ်.. မီးစက် မရှိတဲ့ အိုင်လူသားကြီးပေါ့ဗျာ... :D :D
ဒါကို ဖတ်ရင်းနဲ့ကို ကြိုက်သွားတာ...စိတ်ကူးထဲ အိမ်မက်လဲ ပြတင်းပေါက်အကြောင်းရေးချင်စိတ် ပေါက်သွားတယ်...
ညီထွဋ်ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြီဟေ့... ငါ့သူငယ်ချင်း ပစ်ပစ်ရဲ့ ဝရန်တာလေးတော့ သွားပါပြီ...
ကော်ဖီကြိုက်ပြီး ကော်ပီမကြိုက်တဲ့သူ လာဖတ်ရင်း
ပစ်ပစ်အစား တရားစွဲလိုက်မယ်နော် ဟွင်းဟွင်း
ကတွက်ဆွဲ အဲ စွဲကြစို့လို့လေး)း)
ဖတ်ရတာ တစ်ခုခုအဓိပ္ပါယ်ရှိသလိုတော့ ထင်နေတာ စဖတ်ခါစက ၊ တစ်ခုခုပဲလို့ .....
Facebook တင်ရန် ဓါတ်ပုံရိုက်နည်းများ (The Art of Shooting Photos for Facebook)
Facebook တင်ရန် ဓါတ်ပုံရိုက်နည်းများ (The Art of Shooting Photos for Facebook) Facebook ၏အလှပဂေးများကိုလိုက်လံငမ်းမောကြည့်ရှုရာမှရရှိလာသေ...
ကချင်ပြည်နယ် မလိ-အင်မိုင်ဇွပ်(မြစ်ဆုံ) စီမံကိန်းတွင် ဧရာမမြွေကြီးတစ်ကောင်အား တရုတ်အလုပ်သမားများ သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာအစိုးရသမ္မတ ဦးသိ...
“ဒီမှာ ကိုရွှေခါးကျနော်ကဝိဇ္ဖာဖြစ်ချင်တာဗျ။” “ကိုမြသာ ကျနော်က ခင်ဗျားကို ဝိတ်ဇာ ဖြစ်မည့်နည်းလမ်းတော့မပြောပြတတ်ဘူး။ မဖြစ်မည့်နည်းတွေတော့ပြောပြ...
Do not count what u have lost. Just see what u have now, because past never comes back but sometimes future can give u back your lost thi...
ခုတလော မြန်မာမလေးတွေ ဘာလို့ လေထဲပျံနေရတာလဲ.. ပျော်စရာမဟုတ်သလို ပိုက်ဆံလဲမရပါဘူး.. ဖက်ရှင်တစ်ခုမဟုတ်သလို ခေတ်ရေစီးကြောင်းလဲမဟုတ်ပါဘူး. ဂျ...